Taxi be - Zotra 154 Misy amin’ny 4 sasany hariva dia efa mijanona
Mikaikaika fatratra ireo mpanjifa ny zotram-pitaterana 154 izay miainga etsy Amboditsiry satria dia manodidina ny amin’ny 4 ora sasany hariva eo dia efa mijanona tsy mitondra mpandeha intsony ity zotra maro lalana ity.
Ankadilalana Tsy misy mpijery ilay lalana potika
Vao niandoha ny fihibohana no nilazana, fa hisy ny fanamboarana sy fikojakojana ny làlana. Nambara fa hamboarina ireo lavadavaka. Tsy izay no miseho eto Antananarivo fa mbola ny omaly tsy niova,
Pullman Alarobia Nitsoaka ilay fiara 4x4 nandona olona
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin’ny Pullman Alarobia ny Sabotsy teo.Fiara 4x4 miloko manga mitondra ny laharana vahiny no nifaoka tovolahy iray vao 21 taona ary lasa nitsoaka.
Fanamboarana rarivato Tanora miisa 400.000 no hofanina
Raha araka ny tanjona napetraky nyfitondram-panjakana dia tokony hahavita lalana 10 km isan-taona ny faritra tsirairay avy hahafahana manarina ireo lalan-dratsy mampitaraina ny mponina manerana ny Nosy.
Taxi-moto eto Antananarivo Te hiditra amin` ny ara-dalàna
Nafampana ny ady teo amin` ny Taxi-Moto sy ny kaominina renivohitra Antananarivo (CUA) tamin`ity herinandro ity. Tsy midika akory fa nifarana izany ka ahiana mbola hafàna aza.
Fitateram-bahoaka Naato aloha ny karatra maitso
Miverina hatrany ny fanatsàrana ny tontolon’ny fitateram-bahoaka na ny fanaovana hentitra amin’ny fampiharana ny lalàna.
Miandahy miambavy mihitsy ireo taxi moto miandry sy miantso ireo mpandeha an-tongotra eny rehetra ankoatra ireo mananararaotra miantsona eny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi-be. Mahazo 80.000 Ar isan'andro moa raha kely ny iray amin'ny ireny amin'izay raha araka ny fanadihadiana nataona raha tsy mihoatra ny 20.000 ar ny solika laniny. Raha tsiahivina anefa dia anisan'ny fitaovana fitateram-bahoaka mbola tsy manara-dalana ny taxi moto fa mangalatra miasa fotsiny ihany.Ary tafiditra ao anatin’ireo tsy mahazo mifamezivezy ihany koa toa ny taxi sy ny taxi be; efa nampitandrina ny manampahefana fa mahazo sazy henjana izay tratra.